Uxwebhu lwemibuzo edla ngokubuzwa | UCT Staff
Home > Inclusivity survey > FAQ - isiXhosa
Home > Uxwebhu lwemibuzo edla ngokubuzwa
Uxwebhu lwemibuzo edla ngokubuzwa
Imeko xa iyonke | Inkqubo nexesha eliza kubandakanyeka kule projekthi | Ubumfihlo nokhuseleko | Ukukrotyiswa kuxwebhu lwemibuzo yophando | Udliwano-ndlebe lophando olusebenza ngeenkcukacha kunye nenkqubo yeengxoxo zamaqela amancinane | Uncedo olubonakalayo | Iinkcukacha zenkampani eyenza olu phando kunye nezoxwebhu lwemibuzo yophando | Inkxaso nokuncediswa | Iinkcukacha zoqhagamshelwano
Imeko xa iyonke
Iyenzela ntoni le mfuna-lwazi iUCT?
I-UCT ifuna ukwenza eli ziko lethu libe likhaya kumntu wonke. Xa sithetha gabalala, le mfuna-lwazi imalunga nokujonga ukuba uluntu lwale yunivesithi luziva lusekhaya na, yaye, xa kujongwa ngokukodwa abasebenzi, baziva bebandakanyeka, bexatyisiwe bekwahlonitshiwe na ngokolo hlobo balulo kwanegalelo labo kweli ziko.
Le mfuna-lwazi imalunga neMpatho efanayo yabaSebenzi baseUCT ichongwe ngabaLawuli baseUCT njengenjongo ephambili ehambelana noMgaqo-sikhokelo wokuCwangcisela ukuSebenza waseUCT ka-2016 - 2020. Ilungiselelwe ukuza neenkcukacha ezisisiseko ezinzulu zokukhokela zilinganise indlela aqhuba ngayo amaphulo ongenelelo kunye neziphumo zokusebenza zenkqubo yotshintsho.
I-UCT iyayiqonda into yokuba ayimfuneko amaphulo ongenelelo lwangaphakathi ukuze kubunjwe ngokutsha ubudlelwane nokuqondana kwabantu ngokwenkqubo yokutshintsha esele iqalwe yile yunivesithi. Isiphumo esikhangelwa yiUCT lizinga elinyukileyo lempatho efanayo esisiphumo samaphulo ongenelelo acwangcisiweyo alungiselelwe iifakhalthi namasebe eli ziko.
Imalunga nantoni kanye le mfuna-lwazi?
Owona mba utshisa ibunzi okwangoku isengulowo wokuphathwa ngokufanayo kwabasebenzi nabafundi baseUCT. Xa sithetha gabalala, le mfuna-lwazi imalunga nokujonga ukuba uluntu lwale yunivesithi luziva lusekhaya na, yaye, xa kujongwa ngokukodwa abasebenzi, baziva bebandakanyeka, bexatyisiwe bekwahlonitshiwe na ngokolo hlobo balulo kwanegalelo labo kweli ziko.
Le mfuna-lwazi inesigaba sophando olusebenza ngamanani (uxwebhu lwemibuzo yophando) esilandelwa sisigaba sophando olusebenza ngeengcaciso ezinikwa ngababuzwa ngokuzithandela(udliwano-ndlebe lomntu ngamnye nolwamaqela amancinane). Isiphumo esikhangelwa yiUCT lizinga elinyukileyo lempatho efanayo esisiphumo samaphulo ongenelelo acwangcisiweyo alungiselelwe iifakhalthi namasebe eli ziko. Le mfuna-lwazi sele iliphulo longenelelo elijonge ukuphucula impatho efanayo, kodwa amanye amaphulo ongenelelo olukhethekileyo aya kulandela ukususela ngo-2020 ukuya ngo-2023, apho kuya kuphinda kujongwe ukuba iqhuba njani impatho ngokufanayo kweli ziko.
Kutheni kufuneka ndithathe inxaxheba?
Kubalulekile ukuba sifumane uluhlu olubanzi lweembono nezimvo ukuze iUCT incedakale ekuqondeni lo mba wempatho efanayo kwanezinto ezifunekayo ukuze ifezekiseke apha kweli ziko. Xa ungathathi nxaxheba okanye ungaliniki igalelo lakho, uya kuphoswa lithuba lokuveza ezakho izimvo ebeziya kunceda ekulungiseni eli ziko uphangela kulo. Ngelo xesha, iyunivesithi iphoswa ligalelo lakho ekufezekiseni amaphulo ongenelelo abalulekileyo ekwenzeni iUCT ibe likhaya kubo bonke abasebenzi. Usenokuba nokukrokra okuthile kokuba ngaba imfuna-lwazi iya kufezekisa utshintsho olubonakalayo na, ngoko ke kubalulekile ukuba wazi ukuba ukususela ngo-2020 ukuya ngo-2023 kukho ukuzibophelela okuluqilima ekujonganeni ngempumelelo nemiba yempatho efanayo nokuba abasebenzi bazive bamkelekile kweli ziko.
Ngaba kukho into eza kutshintshwa yile mfuna-lwazi?
Edlula kudala amaxesha apho yayiyinto efihlwayo into yemiba yempatho efanayo nokuziva usekhaya kwiziko. Abalawuli kunye neOfisi yeMpatho eFanayo kunye noTshintsho bayaqonda ukuba le yimiba ephambili eya kuchaphazela intsebenzo, ukufaneleka kunye nokuzinza kweUCT ngokuya kuhamba amaxesha.
Ziya kusetyenziswa njani iziphumo?
Iziphumo ziya kusetyenziselwa ukuba kusekelwe ze kufezekiswe amaphulo ongenelelo okuphucula impatho efanayo kunye nokuziva kwabasebenzi besekhaya kweli ziko. La maphulo ongenelelo aya kufezekiswa ngeofisi yeSekela-Nqununu elijongene neNguqu, uNjingalwazi Loretta Feris kunye neOIC. Abasebenzi baseUCT bayakwazi ukuzifumana iziphumo ngenyanga kaNovemba 2019.
Iziphumo aziyi kusetyenziselwa:
ukungcikiva okanye ukuvuyelela abasebenzi
ukuxela abantu kunye nezimvo zabo
ukwandisa ukuvalelwa ngaphandle nokukhethwa kwabantu
ukuqhuba iphulo elithile lezopolitiko.
Ngaphezulu, iUCT ayisoze ikwazi ukufikelela kwiinkcukacha ezingekahlalutywa, yaye ingayi kunikwa naluphi uhlalutyo lweenkcukacha zamaqela anamalungu angaphantsi kwe-10. Oku kuya kuphinda kukhusele ukwaziwa kwabathathi-nxaxheba.
Ziya kukhutshwa njani yaye nini iziphumo?
Iziphumo ziya kukhutshwa kwingxelo ngoNovemba 2019, neya kuquka okufunyansiwe kwisigaba seempendulo esele zilungiselelwe kunye neso seempendulo ezinikwa ngababuzwa, ngokunjalo neziphakamiso zamanye amaphulo ongenelelo. Kuza kuphinda kusetyenziswe iQonga likaVC kunye namanye amajelo eli ziko ukunika ingxelo malunga namaphulo ongenelelo alungiselelwayo kunye nezenzo eziza kulandela.
Kucelwa ukuba igcwaliswe ngubani le mfuna-lwazi?
Kumenywa bonke abasebenzi ukuba bathathe inxaxheba, ngaphandle kweetyhutha. Oku kuquka abasebenzi abaqeshwe ngokusisigxina nabaqeshwe ngekhontrakthi, nokuba baqeshwe nje okwethutyana.
Kunyanzelekile ukuthatha inxaxheba?
Hayi akunyanzelekanga. Kodwa ke iUCT ingakuvuyela ukuva izimvo zabasebenzi abaninzi kangangoko ukuze iqinisekise ukuba kuqukwa kuze kuvakale igalelo nezimvo zomntu wonke. Siyakubongoza ukuba uzinike ithuba lokugcwalisa olu xwebhu lwemibuzo yophando ukuze wenze iUCT ibe liziko elinempatho efanayo. Ukugcwalisa olu xwebhu kuya kuthatha imizuzu engama-20 kuphela.
Kuthethiwe neemanyano zaseUCT?
Ngomhla we-8 kuEpreli 2019 ubunkokeli bazo zonke iimanyano ezimelwe eUCT buye baziswa malunga nale mfuna-lwazi kunye neAephoria, eza kuqhuba olu phando. Ngethuba lale ndibano iye yaphendulwa imibuzo malunga nokuhanjiswa kwale mfuna-lwazi kunye neelwimi eziza kusetyenziswa.
Zithathwe njani izigqibo malunga nale projekthi?
Ikomiti yomsebenzi wethutyana echongelwe ukusebenza, ekhokelwa nguSekela-nqununu ojongene neNguqu, uNjingalwazi Loretta Feris, yiyo ebeka esweni ukukhangelwa, ukuchongwa kwenkampani eza kuqhuba le mfuna-lwazi kwanokufezekiswa kwale mfuna-lwazi. Ukususela oko ithe yachongwa le nkampani iyiAephoria, ngoJanyuwari 2019, le komiti yomsebenzi wethutyana echongelwe ukusebenza isoloko icebisa malunga nolu phando ithatha nezigqibo ezibalulekileyo malunga nalo. Le misebezi ibiquka iingxoxo ebezibanjwa nabameli bamaqela ngamaqela kunye nabantu abazimeleyo, kuquka amasebe akhethekileyo ePASS, iimanyano kunye namaqonga obunkokeli. Abalawuli baseUCT bebesoloko beyinxalenye yale nkqubo.
Kuye kwayilwa umgaqo-sikhokelo oya kukhokela zonke izigqibo nezivumelwano, kwanokuqinisekisa ukuba isoloko ithathelwa ingqalelo le mimiselo:
ukujongana nezinto ezenzekayo ezingaqikelelwayo
impatho efanayo kunye nokuphathwa ngokufanelekileyo
ukuphathana kakuhle kwabantu abasebenza kunye, uluntu nokuthembeka
ukuziphatha ngendlela enesidima.
Kutheni bengabandakanywa abafundi?
Ngabasebenzi abona bantu kugxilwe kubo kule projekthi.
Abafundi baseUCT baye bathatha inxaxheba kwiMfuna-lwazi yokuBandakanywa kwabaFundi baseMzantsi Afrika (iSouth African Survey of Student Engagement - SASSE) ngoSeptemba ka-2018. Loo mfuna-lwazi yayiqhutywa yiYunivesithi yaseFreyistatha yaza yaqokelela iinkcukacha kwiiyunivesithi ezininzi kwilizwe jikelele. Kusaza kunikwa ingxelo kuloo maziko-mfundo. Le ngxelo iya kuquka iinkcukacha ezikumgangatho ophezulu ezikhuthaza utshintsho kwimeko yokufunda, tshintsho olo lujonge ukukhuthaza impumelelo yabafundi. Ingxelo eza kuluntu lwaseUCT ngokubanzi ivela kwiSASSE iya kunikwa ekupheleni kukaJuni 2019. Iziphumo zale mfuna-lwazi kunye nazo zonke iimfuna-lwazi zabafundi eziya kulandela, ziya kuthathelwa ingqalelo zize zihanjelaniswe neziphumo kunye namaphulo ongenelelo aya kufezekiselwa abasebenzi.
Le mfuna-lwazi inxulumana njani nenkqubo kwakunye nengxelo yeIRTC?
I-UCT ifuna ukweza eli ziko lethu libe likhaya kumntu wonke. Le mfuna-lwazi imalunga neMpatho efanayo yabaSebenzi baseUCT ichongwe ziinkokeli zaseUCT njengenjongo ephambili ehambelana noMgaqo-sikhokelo wokuCwangcisela ukuSebenza waseUCT ka-2016 - 2020. Amalungiselelo ale projekthi aqale ngo-2017. Ilungiselelwe ukuza neenkcukacha ezisisiseko ezinzulu zokukhokela zilinganise indlela aqhuba ngayo amaphulo ongenelelo kunye neziphumo zokusebenza zenkqubo yotshintsho. Umhlaba oza kufikelelwa yile mfuna-lwazi wahlukile kulowo weIRTC, nangona iza kuyithathela ingqalelo ingxelo yeIRTC kunye nezigqibo ezithathwe liBhunga malunga noku.
Inkqubo nexesha eliza kubandakanyeka kule projekthi
Iza kubandakanya eliphi ixesha le projekthi?
Ukubhengezwa kwemfuna-lwazi: 13 Meyi 2019
Imfuna-lwazi ivulelekile ukuba ibe nokugcwaliswa: 20 Meyi - 14 Juni 2019
Uhlalutyo olungekagqitywa lweenkcukacha zophando olusebenza ngamanani: 24 Juni - 26 Julayi 2019
Udliwano-ndlebe lomntu ngamnye nolwamaqela amancinane: 29 Julayi - 13 Septemba 2019
Ukuhlalutywa kweenkcukacha zophando olusebenza ngamanani kunye nezolusebenza ngeengcaciso: 16 Septemba - 14 Okthobha 2019
Ingxelo esayilwayo eya kunikwa iKomiti yoMsebezi weThutyana kunye nesigqeba esilawula iYunivesithi: 24 Okthobha 2019
Ukukhutshwa kwengxelo egqityiweyo: 11 Novemba 2019
Ingagcwaliswa njani le mfuna-lwazi?
Uninzi lwabasebenzi luya kufumana ilinki ekhethekileyo eya kuthunyelwa kwiidilesi zabo zee-imeyile zaseUCT, neziya kubasa ngqo kolu xwebhu lwemibuzo yophando. Olu xwebhu lunokugcwaliswa kwi-intanethi kusetyenziswa ikhompyutha, ithabhlethi okanye iselfowuni.
Abanye abasebenzi, ngakumbi abo bakwiSebe lemiCimbi yezabafundi kunye neSebe leePropati neeNkonzo, baya kufumana uxwebhu lwemibuzo yophando esephepheni ekuya kufuneka bayigcwalise baze bayibuyisele eAephoria besebenzisa iposi yangaphakathi.
Ukuba awukayifumani ilinki yemibuzo yophando okanye incwadana yoxwebhu lwemibuzo yophando (iya kuthunyelwa ngomhla wama-20 kuMeyi 2019) nceda uqhagamshelane kunye ne-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441.
Kuphelelwa nini ukugcwaliswa kwale mfuna-lwazi?
Ukuba uyigcwalisa kwi-intanethi le mfuna-lwazi, uya kufumana ilinki evela kule dilesi yeimeyile: inclusion@aephoria.co.za ngomhla wama-20 kuMeyi 2019.
Ukuba ugcwalisa imfuna-lwazi esephepheni, umphathi wakho uya kuthetha nawe ukwenza amalungiselelo oku ngeveki yokuqala yale mfuna-lwazi (iveki yama-20 - 27 Meyi 2019).
Ukuba awuyikayifumani imfuna-lwazi yakho, nceda uqhagamshelane ne-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441.
Le mfuna-lwazi kufuneka ibe sele igcwalisiwe nge-23:59 ngoLwesihlanu, umhla we-14 kuJuni 2019. Ungalindi de kube ngumzuzu wokugqibela!
Kwenzekani emva kokuba kugqityiwe ukuqokelelwa iinkcukacha ezisebenza ngamanani (uxwebhu lwemibuzo yophando) zale mfuna-lwazi?
Iziphumo ezingekagqitywa ziya kuhlalutywa kujongwe iindawo ezigqwesayo, ngokunjalo neendawo ezixhalabisayo kweli ziko-mfundo. Kuya kuqhutywa udliwano-ndlebe lomntu ngamnye kunye nolwamaqela amancinane ukwenzela ukuqinisekisa ezo nkcukacha zifunyaniswayo.
Ukucelwa kwakho ukuba uthathe inxaxheba kweli nqanaba lophando akuyi kusekelwa kwiimpendulo ozinikileyo, nanjengoko zingakwazi ukubonwa ukuba zezakho. Kuza kuthunyelelwa bonke abasebenzi isaziso esibacelayo ukuba bathathe inxaxheba kwesi sigaba solu phando ngokusekelwe kumaqela abangena kuwo ngokophawu lwabo oluthile, maqela lawo athe achongwa njengabalulekileyo ukuba kuphandwe banzi ngawo. Nokuba le mfuna-lwazi igcwaliswe nguwe na okanye hayi, loo nto ayiyi kuyichaphazela inxenye yolu phando eyinkqubo yophando olusebenza ngengcaciso. Awunyanzelekanga ukuba usamkele isimemo sokuba yinxalenye yeengxoxo zamaqela amancinane ophando okanye uthathe inxaxheba kudliwano-ndlebe. Uthatha inxaxheba ngokuzithandela kuphela.
Ukuba ufuna ukuzinikela ube kwisigaba esisebenza ngeengcaciso kolu phando, nceda uthumele i-imeyile kwi-: volunteer@aephoria.co.za unika isizathu esifutshane sokuba kutheni ungathanda ukubandakanywa kudliwano-ndlebe.
Ziya kukhutshwa njani nini iziphumo?
Bonke abasebenzi baseUCT baza kukwazi ukufikelela kwingxelo yokufunyanisiweyo eya kufakwa kwiwebhusayithi yabasebenzi ungaphelanga unyaka wokufundisa ka-2019.
Amanye amathuba okunika ingxelo aya kugqitywa kunye nesigqeba esilawula iyunivesithi.
Kuza kwenzeka ntoni emva kwango-2019?
Iziphumo zale mfuna-lwazi ziya kuphembelela uluhlu lwamaphulo ongenelelo kunye nezenzo zenguqu ezijonge ukuphucula impatho efanayo eUCT. Loo maphulo ongenelelo aya kufezekiswa phantsi kobunkokeli beSekela-nqununu elijongene neNguqu kunye neOfisi yeMpatho eFanayo noTshintsho. La maphulo ongenelelo anokususela ekutshintsheni imigaqo-nkqubo nezenzo zeli ziko, ukuya kumaphulo ongenelelo ophuhliso olujolise kumasebe okanye iifakhalthi ezikhethiweyo.
Kujongwe ukuba la maphulo ongenelelo aqhube ukususela ngo-2020 ukuya ku-2023.
Ngaba le mfuna-lwazi iya kuba ngumlinganiselo owenzeka kube kanye kuphela?
Hayi. Le mfuna-lwazi sisiqalo sephulo longenelelo neprojekthi yenguqu eya kuqhuba iminyaka emithathu de kube ngo-2023, apho impatho efanayo iya kuphinda ilinganiselwe ukulandelela uphuculo nefuthe lamaphulo ongenelelo enguqu.
Kwenziwa njani ukukhusela ukwaziwa kweenkcukacha zam njengomthathi-nxaxheba kule mfuna-lwazi?
I-UCT ayikwazi kufikelela kwiimpendulo zomntu ngamnye yaye ayiyi kukwazi nokuba uye wathatha inxaxheba na okanye hayi. Iinkcukacha neempendulo zakho zikhuselekile. Zonke iinkcukacha ziphathwa yinkampani eyenza olu phando yaye idathabheyisi yeziphumo ayinalo igama, ifani okanye idilesi yeimeyile yakho. I-UCT ayiyi kukhutshelwa ngxelo idityanisiweyo yamaqela abathathi-nxaxheba abangaphantsi kweshumi.
Kweminye imibuzo yeenkcukacha ezimalunga nomthathi-nxaxheba uyakhethiswa ukuba uthi "ndikhetha ukungaphenduli", xa unexhala lokuba ingakuveza ukuba ungubani.
Ndingaqiniseka njani ukuba ezi nkcukacha zophando aziyi kusetyenziselwa ukundixela ukuba ndingubani?
I-Aephoria, eyinkampani eyenza uphando, yiyo eya kuphatha zonke iinkcukacha zophando yaye isayine isivumelwano sokuba ingazidluliseli eUCT iinkcukacha zophando okanye iimpendulo zomntu ngamnye. Le nkampani sele inamava okuqhuba uphando olunje isenzela abantu abangaphezu kwama-50 000 kwihlabathi jikelele yaye kuzo zonke iiprojekthi zangaphambili zange ikhe ibe nangxaki ngokhuseleko lweenkcukacha zophando okanye eli solotya lokufihlwa kweenkcukacha ezixela abathathi-nxaxheba.
Kutheni ke nibuza iinkcukacha zam?
Ezi nkcukacha ziya kusetyenziselwa nje ukuqonda ukuba izimvo zakho ziwela kweliphi icala ngokunxulumene neendlela zokungabandakanywa kunye nempatho efanayo eUCT. Kufuneka le mfuna-lwazi iquke nale mibuzo kuba xa zingekho iinkcukacha ezithile zakho, le nkampani ayinakukwazi kutsho ukuba ngubani oziva ebandakanyeka ingubani oziva engabandakanywa, kungenjalo ibonise impatho efanayo nokungabandakanywa kwabanye. La macandelo akwimibuzo emalunga neenkcukacha zakho enziwe akhangela ezo nkcukacha zibalulekileyo, kodwa zikwazi ukukhuseleka; ukwenzela ukwandisa ukukwazi ukufihleka kweenkcukacha zabathathi-nxaxheba.
Uza kuyazi into endiyithethe kule mfuna-lwazi umphathi wam?
Umphathi wakho akayi kuzifumana iimpendulo zakho naphantsi kweziphi na iimeko. Ukuba ulilungu lesebe elincinane kakhulu elinabasebenzi abangaphantsi kwe-10 yaye uyigcwalisile le mfuna-lwazi, iziphumo zesebe lakho ziya kuqukwa kwezinye ezininzi, umz. kwezefakhalthi yakho.
Ngubani oya kufikelela kwiinkcukacha neempendulo?
Iya kuba liqela laseAephoria elibandakanyeka kule projekthi kuphela elifikelela kwiinkcukacha zophando neempendulo ezinikwayo, njengoko beyinkampani yangaphandle. Idathabheyisi abasebenza ngayo ekuhlalutyeni iimpendulo ezinikwayo yidathabheyisi esele yenziwe yangazixeli iinkcukacha zabathathi-nkxaxheba, nanjengoko ingenawo amagama, iifani okanye iidilesi zeimeyile zabathathi-nxaxheba.
Amaxwebhu emibuzo yophando asephepheni aphethwe ngabachwethezi-nkcukacha abaphantsi kweliso leAephoria aze akrazulwe emva kokuba zithathiwe iinkcukacha kuwo.
Iinkcukacha ezinxulumene nezinye iinkcukacha ziya kubonwa yintloko yeICT yaseAephoria, nesayiniswe ikhontrakthi yokuba ingazixeli.
I-UCT ayizi kuzibona iimpendulo zomntu ngamnye kunye neenkcukacha ezinokumveza.
Ikhona enye into ezinokusetyenziselwa yona iinkcukacha zam ngaphandle kwale mfuna-lwazi?
Idilesi yakho yeimeyile iya kusetyenziselwa ukukuthumelela ilinki ekusa kule mfuna-lwazi kunye nemiyalezo ekukhumbuzayo ukuba uyigcwalise. Ziya kusetyenziselwa nokukuthumelela i-imeyile ethunyelelwa umntu wonke, ekumemela ukuba uzibandakanye ngokuzithandela neseshoni yeqela elincinane lophando okanye udliwano-ndlebe oludingekayo kwisigaba sophando olusebenza ngengcaciso. Esi iya kuba sisimemo esiya kumntu wonke yaye asiyi kusekelwa ekuthatheni kwakho inxaxheba kule mfuna-lwazi okanye kwiimpendulo ozinike kuxwebhu lwemibuzo yophando.
Iya kutshatyalaliswa idathabheyisi zisakugqitywa zozibini ezi zigaba zophando. Iinkcukacha zakho zonxibelelwano aziyi kusetyenziselwa nayiphi enye injongo, yaye awuyi kuthunyelelwa zi-imeyile okanye uthengiselwe iinkonzo ezinikwa yile nkampani, iAephoria, ngaphandle kwemvume yakho.
Xa uqalisa ukugcwalisa olu xwebhu lwemibuzo yophando, uya kunikwa nethuba lokukhetha ukuba iinkcukacha zakho zophando zikwazi ukusetyenziselwa olunye uphando lwezemfundo. Usenokusamkela okanye usikhabe esi simemo. Kodwa nokuba uthatha siphi isigqibo, usaza kucelwa ukuba ulugcwalise olu xwebhu lwemibuzo yophando. Ukuba kuqhutywa olunye uphando lwezemfundo, luya kuquka abo bantu baye banika imvume yabo kuphela. Iinkcukacha zophando ezisetyenziswe kuphando olunjalo ziya kusetyenziswa ngendlela ezingaveziyo iinkcukacha zabathathi-nxaxheba.
Zikhuseleke kangakanani iiseva eziza kugcinwa kuzo iinkcukacha zophando?
Zonke iinkcukacha zophando ezikuLinganiso lokuBandakanyeka zigcinwa kwidathabheyisi ebhalwe ngeekhowudi (i-enkhripthwe) kusetyenziswa uguqulelo-khowudini lweRSA (uku-enkhriptha kweRSA). Uqhagamshelo kule dathabheyisi luya kuvalelwa ngendlela eqinisekisa ukuba iinkcukacha ezingenayo neziphumayo zivela zikwaya kwiklawudi yabucala egcine eli qonga lophando.
Isistim yeMfuna-lwazi yeMpatho efanayo eluLinganiso lokuBandakanya isebenzisa istifiketi sokhuselo seSSL ukwenzela ukuqinisekisa ukuba iingxoxo kunye neempendulo zakho zingafunyanwa ngumntu wangaphandle okanye amasela eenkcukacha.
Kufuneka usoloko uqiniseka ukuba umqolo wokuqhubeka ekhompyutheni (i-status bar) webhrawuza yakho ubonisa ukuba uqhagamshelwe ngokukhuselekileyo kweli qonga lophando. Yakuba igqityiwe le mfuna-lwazi, zonke iinkcukacha ziya kukhutshwa kweli qonga zibekwe bucala ukuze zigcinwe kuvimba wethuba elide.
Kuqinisekiswa njani ukuba abathathi-nxaxheba balugcwalisa kanye uxwebhu lwemibuzo yophando?
Umsebenzi ngamnye olufumana ngekhompyutha uxwebhu lwemibuzo yophando uya kufumana ilinki ekhethekileyo aya kuyithunyelelwa ngeimeyile. Loo linki inokusetyenziswa kanye kuphela. Ukuba ilinki yakho uyidlulisela komnye umntu emva kokuba ugqibile ukugcwalisa uxwebhu lwemibuzo yophando, yena uya kufikelela nje kwisikrini esimbulelayo ngokuthatha kwakhe inxaxheba.
Umsebenzi ngamnye ofumana uxwebhu lwemibuzo yophando esephepheni uya kufumana incwadana enophawu oluthile olungafotokopekiyo yaye lungaskeneki. Kuya kwamkelwa amaphepha amaxwebhu emibuzo yophando angawoqobo kuphela aze achwethezwe iinkcukacha zifakwe kwidathabheyisi.
Ngaba le mfuna-lwazi iyifumene imvume yaseUCT yeendlela zokuziphatha ngokusesikweni kuphando?
Ewe, inayo. Isicelo sokuvunywa kweendlela zokuziphatha ngokusesikweni kuphando siye saphononongwa saza saphunyezwa yiFakhalthi yezoRhwebo. Le mvume iya kusebenza ithuba lonyaka, de kube nguEpreli ka-2020, yaye inokuhlaziywa emva koko.
Ukukrotyiswa kuxwebhu lwemibuzo yophando
Olu xwebhu lwemibuzo yophando lufumaneka ngeAfrikaans, isiNgesi nesiXhosa.
Le mfuna-lwazi iyafikeleleka kubantu abangaboni kakuhle?
Ewe, olu xwebhu lwemibuzo yophando luyilelwe ukulungiselela nabantu abangaboni kakuhle abasebenzisa iJAWS (izilungiseleli-kufundeka kwesikrini sekhompyutha). Ukuba iyakusokolisa iJAWS, nceda uqhagamshelane ne-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441.
Kuthatha ixesha elingakanani ukugcwalisa olu uxwebhu?
Olu xwebhu unokuligcwaliswa kwimizuzu engama-20.
Mingaphi imibuzo ekulo?
Kukho imibuzo engama-83 apho ukorekisha ibhokisi kungafuneki ngcaciso. Ngaphezulu, kuphinda kubekho iindawo ezintathu ezongezelelweyo zokubhala iimpendulo ngamazwi akho.
Ungalindela imibuzo enjani?
Imibuzo ibandakanya uluhlu lwezihloko ezinxulumene nempatho entle, zihloko ezo zifana nobunkokeli, ukukhangelwa kwabasebenzi abatsha, ukuvuyelelwa nokutshutshiswa, kwakunye nokucalulwa. Uninzi lwemibuzo iphendulwa kusetyenziswa izinga lokulinganisa elimpendulo zintlanu, apho ukhetha impendulo ukususela kwethi "andivumelani tu" ukuya kutsho kwethi "ndivumelana kakhulu".
Lo ngumzekelo wemibuzo onokucelwa ukuba uyiphendule:
Abantu baseUCT banolwazi olubanzi malunga nezihloko ezimalunga nokwahluka, impatho efanayo kunye nenguqu.
Ziziphi iinkcukacha zakho onokulindela ukuzibuzwa?
Iinkcukacha zakho zibuzelwa ukuze kukwazeke ukuhlalutya iziphumo ngokukuko yaye ziya kunceda ekukujongeni ukuba ngawaphi amaqela abantu angabandakanywayo ingawaphi afumana impatho efanayo.
Asizibuzi ezi nkcukacha:
igama nefani yakho
inombolo yakho yengqesho
idilesi yakho yeimeyile
inombolo yakho yomnxeba
Nazi iinkcukacha esizibuzayo:
Unokukhetha ukungayiphenduli eminye yale mibuzo, ngokukhetha indawo ethi "ndikhetha ukungaphenduli".
Yintoni umahluko phakathi koxwebhu lwemibuzo yophando olusephepheni kunye nolo lusekhompyutheni?
Udliwano-ndlebe lophando olusebenza ngeenkcukacha kunye nenkqubo yeengxoxo zamaqela amancinane
Ngubani oza kumenyelwa kudliwano-ndlebe kunye neengxoxo zamaqela amancinane?
Yakuba igqityiwe imfuna-lwazi eya kwenziwa ngophando olusebenza ngamanani, kuya kuhlalutywa iziphumo ezingekagqitywa kujongwe iindawo ezigqwesayo, ngokunjalo neendawo ezixhalabisayo kweli ziko-mfundo. Ngokusekelwe koku, bonke abasebenzi baseUCT baya kuthunyelelwa i-imeyile emema bonke abantu abaphuma kumaqela okanye iinkalo ezithile ezinomdla ukuba bazibandakanye ngokuzithandela kwiiseshoni zamaqela amancinane ophando okanye udliwano-ndlebe. Esi iya kuba sisimemo esiya kumntu wonke yaye asiyi kusekelwa ekuthatheni kwakho inxaxheba kule mfuna-lwazi okanye kwiimpendulo ozinike kuxwebhu lwemibuzo yophando.
Uyamenywa ukuba uzinikele ukuba ube nokuthatha inxaxheba kwesi sigaba solu phando. Nceda uthumele i-imeyile kwi-: volunteer@aephoria.co.za unika isizathu esifutshane sokuba kutheni ungathanda ukubandakanywa kudliwano-ndlebe. Oku akuqinisekisi ukuba uya kufakwa kwesi sigaba sophando, kodwa le nkampani iqhuba olu phando iya kukuxelela okuza kuqhubeka malunga nesi sicelo sakho.
Luya kuqhuba nini olu dliwano-ndlebe nezi ngxoxo zamaqela amancinane?
Udliwano-ndlebe kunye neengxoxo zamaqela amancinane ziya kuqhuba phakathi komhla wama-29 Julayi nowe-13 kuSeptemba 2019.
Xa ndingayifumani kwi-imeyile yam ilinki yoxwebhu lwemibuzo yophando?
Thumela i-imeyile ku-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441 ucele ukuphinda uyithunyelelwe le linki.
Ilinki yam ilahlekile/icimekile. Ndingasebenzisa ilinki ethunyelelwe ugxa wam?
Hayi, awunakho. Ilinki nganye inokusetyenziswa kanye kuphela. Nceda uthumele i-imeyile ku-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441 ucele ukuphinda uyithunyelelwe le linki.
Kuye kwemka umbane ndisagcwalisa uxwebhu lwemibuzo yophando - kuza kwenzekani ke ngoku?
Akukho ngxaki. Qho unecandelo oligqibayo, isistim iyazigcina iimpendulo zakho. Akuzi kufuneka ukuba uluqalele lonke olu xwebhu lwemibuzo yophando. Kuza kufuneka nje ucofe kule linki ikwi-imeyile obuyithunyelelwe, uza kucelwa ukuba uthathele apho ubuyeke khona.
Olu xwebhu lwemibuzo yophando ndingalugcwalisa ndisebenzisa esiphi isixhobo?
Olu xwebhu lwemibuzo yophando luhambelana neekhompyutha, iithabhlethi kunye neeselfowuni. Ungasebenzisa nasiphi isixhobo kunye nebhrawuza ozikhethela yona. Kodwa kudla ngokuba luncedo ukuba ube nekhibhodi epheleleyo oza kuyisebenzisa ukuchwetheza ezo ndawo, zinganyanzelekanga, zifuna uzigcwalise ngamazwi akho.
Ndilithini iphepha loxwebhu lwemibuzo yophando ndisakugqiba ukulugcwalisa?
Faka uxwebhu olo kwimvulophu esele inedilesi oyifumana xa unikwa olu xwebhu lwemibuzo yophando, uze uluse kwiposi yangaphakathi yaseUCT. Luya kudluliselwa kwinkampani eqhuba olu phando, neya kuthi yona iluchwetheze, ilufake ekhompyutheni. Le khampasi ayinazo iibhokisi ekuqokelelwa kuzo iposi.
Andilfumananga uxwebhu lwemibuzo yophando olusephepheni ebendimele ukulufumana. Ndilufumana njani uxwebhu lwam lwemibuzo yophando? (oku kubhekisa kubasebenzi abakwiCandelo lemiCimbi yezabaFundi kunye neleePropati neeNkonzo kuphela)
Nceda usazise ngokuthumela i-imeyile ku-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441 kungenjalo uthethe nomphathi wakho. Ukuba unenkxalabo malunga nenkqubo yokuphathwa kwamaxwebhu emibuzo yophando, ungaqhagamshelana neOfisi yeMpatho efanayo noTshintsho kwa-: 021 650 2767. Ukhumbule ukuba olu phando aluyi kule Ofisi yempatho efanayo noTshintsho, nanjengoko zonke iifomu ezigcwalisiweyo ziya kubuyiselwa ngqo eAephoria.
Ziza kuchotshelwa phi nini iiseshoni zokugcwalisa olu xwebhu lwemibuzo yophando?
Abasebenzi beSebe lemiCimbi yezabaFundi kunye neleePropati neeNkonzo baya kwaziswa malunga namaxesha, imihla kunye neendawo eziza kuqhutyelwa kuzo iiseshoni zokugcwalisa olu xwebhu lwemibuzo yophando. Ezi seshoni ziya kuqhutywa ngamaxesha akhethwe lisebe lakho, aya kuba phakathi kowama-20 kuMeyi kunye nowe-14 kuJuni 2019. Olu xwebhu lwemibuzo yophando usenokuzigcwasela ngexesha lakho emva kokuba ulufumene, uluthumele kule nkampani iqhuba uphando usebenzisa idilesi yeimeyile ekuloo mvulophu uyinikiweyo.
Ilahlekile imvulophu yoxwebhu lwam lwephepha lemibuzo. Ndiyibuyisela njani kuni?
Ukuba ilahlekile imvulophu yakho, uxwebhu lwakho unokulufaka kuyo nayiphi imvulophu uyithumele kule dilesi:
UCT Post Room
Emva koko, ungayifaka kwiposi yangaphakathi ukuze iye ngqo kule nkampani iqhuba uphando. IGumbi lePosi linendawo ekhuselekileyo yeposi enokufikelelwa yiAephoria kuphela. Unokulisa ngeenyawo eAephoria uxwebhu lwakho lwemibuzo yophando kwa-Unit 19, Draper Square, Draper Street, Claremont 7708; okanye uluse kuNina Barnes kwiOfisi yeMpatho efanayo noTshintsho kwiSakhiwo i-Ivan Toms, e-28 Rhodes Avenue, Mowbray (ecaleni kweWellness -kweNkonzo zokuba sempilweni kwaBafundi).
Iinkcukacha zenkampani eyenza olu phando kunye nezoxwebhu lwemibuzo yophando
Yiyiphi le nkampani iza kuqhuba le projekthi?
Inkampani eza kuqhuba olu phando ichongelwe ukuqhuba zozibini izigaba zale projekthi: esophando olusebenza ngamanani kunye neso sophando olusebenza ngeengcaciso. Igama lale nkampani yiAephoria yaye yeyalapha eKapa.
Kuye kwanyulwa iqela lomsebenzi wethutyana, elikhokelwa nguNjingalwazi Feris, oliSekela-nqununu elijongene neNguqu eliye labeka esweni ukukhangelwa nokuchongwa kwenkampani eqhuba olu phando. Ngo-2018 kuye kwaqhutywa inkqubo yokukhuphisana ngokuchongelwa ukuqhuba olu phando yaza le nkampani yachongwa njengeyona ifanelekileyo.
Ngaba uLinganiso lokuBandakanyeka luxwebhu lwemibuzo yophando olufanelekileyo nolunokuthenjwa?
Ewe. Olu xwebhu lwemibuzo yophando luqinisekisiwe yaye ukuza kuthi ga ngoku sele lukhe lanikwa ngaphezu kwabantu abangama-50 000 kumaZantsi eAfrika, eUK, eYurophu naseUSA.
Olu Linganiso lokuBandakanyeka lusekelwe ukulinganisa impatho efanayo yaye luye lwaphicothwa kangangoko ziingcali zezemfundo zisenzela ukuqinisekisa ukufaneleka nokuthembeka kwalo. Ngethuba luphononongwa olu Linganiso lokuBandakanyeka kuye kwajongwa imiba yophicotho-ngqiqo obelusenzelwa ukujonga ukuzinza kweempawu zalo eziqaqambileyo. Kuye kwenziwa ezi mvavanyo zilandelayo ngethuba kuphononongwa olu Linganiso lokuBandakanyeka:
uhlalutyo lweenkcukacha ezichazayo zomba ngamnye
uhlalutyo lwemiba enxulumeneyo olwenzelwe ukuphanda ukuba le miba inxulumene ngokwaneleyo na ngokwendlela ecaciswe kuLuhlu lweKMO
uhlalutyo olunciphisa unxulumano lwemiba ephambili
uhlalutyo lohambelwano lwangaphakathi lomba ngamnye osebenzise iCronbach's Alpha njengendlela yokulinganisa ukuthembeka kwezinga lokufana kwamanani (isumscale)
uhlalutyo lwemiba enxulumeneyo olubandakanya onke amazinga okufana kwamanani, ukwenzela ukujonga ubungakanani kokuqinisekiswa konxulumano-miba
iprofayile yemiba enokulinganiswa yamazinga okuphonononga isistim yoboniso-migangatho yaloo miba ilinganiswayo, sistim leyo isebenzisa imibala emithathu (obomvu, o-orenji noluhlaza)
uhlalutyo lophindaphindeko lomba olusebenzisa imibala emithathu ukucacisa imiba elinganiswayo.
Obu bungqwabalala kwindlela yokuqinisekisa ukuthembeka kolu phando bulwenza olu Linganiso lokuBandakanyeka lungafani nezinye iimfuna-lwazi ezikhangela izimvo zabasebenzi gabalala ezithi ziqhutywe ngamaziko amaninzi.
Yiyiphi enye indawo olukhe lwasetyenziswa kuyo olu xwebhu lwemibuzo yophando?
Le mfuna-lwazi sele isetyenziswe luluhlu lwamaziko nemibutho, ukususela kwiyunivesithi namasebe karhulumente ukuya kwiiarhente nemibutho engajonganga nzuzo. Nangona ezinye iiyunivesithi sezikhe zalusebenzisa olu xwebu, kodwa iUCT yiyunivesithi yokuqala eMzantsi Afrika ukulwenza lonke uLinganiso lokuBandakanyeka.
Ziye zathini iziphumo nezenzo ezivele ekusetyenzisweni kwale mfuna-lwazi?
Nalu uphuculo, izenzo kunye namaphulo ongenelelo athe enziwa emva kokusetyenziswa kwale mfuna-lwazi:
Inkampani ethengisa impahla kwihlabathi jikelele iye yaphonononga yaza yatshintsha iinkqubo zayo zokukhangela abasebenzi abatsha nokunyusela abasebenzi bayo. Baye baseka neendlela ezicwangcisekileyo zokuba amaqela anabantu abambalwa bakwazi ukunika ingxelo.
Iyunivesithi yaseUK iye yaqalela ukuphicotha nokulungisa iindlela ezilandelwayo xa kunikwa ingxelo malunga nokuvuyelelwa nokungcungcuthekiswa, yatsho yakwenza kwalula kakhulu ukuxela izehlo ezinjalo.
Inkampani yeenkonzo zezemali iye yaqhuba inkqubo yokuncedisana nabasebenzi abatsha ukwenzela ukuqinisekisa ukuba abasebenzi bayo bayakwazi ukufikelela kwiinkonzo zeengcebiso zeengcali malunga noxinzelelo.
Inkampani yezobunjineli iye yongeza indlela yokulinganisa ukwahluka nempatho efanayo kwizalathi-ntsebenzo ezingundoqo zabalawuli bayo.
Ukugcwalisa olu xwebhu lwemibuzo yophando kundishiye ndingakhululekanga yaye ndingazinzanga. Ndingaqhagamshelana nabani ukuze ndifumane enye inkxaso okanye iingcebiso zengcali?
Ungafumana iNkqubo yaseUCT yeMpilo nokuba seMpilweni yabaSebenzi kwa-: http://www.staff.uct.ac.za/staff/support/health/counselling kungenjalo usebenzise ifowuni kaTelkom ukufowunela le nombolo ingahlawulelwayo: 0801 113 945 (efumaneka iiyure ezingama-24) nalapho uya kukwazi ukuncokola nengcali yomcebisi yalapha ekhampasini.
Ingcali yomcebisi yalapha ekhampasini othetha isiNgesi iya kufumaneka ngemiVulo nangoLwezithathu, ngelixa ethetha isiXhosa ifumaneka ngoLwezihlanu (ukususela ngeye-09:00 ukuya ngeyoku-13:00). Zombini ezi ngcali zicebisayo ziya kuba kwisakhiwo iBremner. Ukuba unokuthanda ukwenza idinga lokubona enye yezi ngcali zabacebisi, nceda ubhukishe ngokufowunela le nombolo ingahlawulelwayo.
Nazi ezinye izinto onokukhetha kuzo:
Ingcali engumcebisi yalapha ekhampasini ekwiPhulo likaThintela weSifo sePhepha eMzantsi Afrika (iSouth African Tuberculosis Vaccine Initiative - iSATVI) (efika kanye ngenyanga). Qhagamshelana noMarwou de Kock kwa-: 023 346 5400.
Ingcali yomcebisi yalapha ekhampansini ekwiZiko leNtsholongwane kaGawulayo iDesmond Tutu (efika kanye ngenyanga). Qhagamshelana noGqr. Zandile Mkhize.
Ungacela ukufowunelwa ngokuthumela ikhowudi yeUSSD ngokucofa u-*134*905# ukuze ufumane iingcebiso zeengcali zabacebisi. Nceda uqaphele ukuba lo ayingomnxeba woncedo wokuncedisa kwimiba gabalala emalunga nolu xwebhu lemibuzo yophando.
Ndifuna inkxaso yangethuba ndigcwalisa olu xwebhu lwemibuzo yophando. Ndingalufuna njani uncedo?
Ukuba ufumene uxwebhu lwemibuzo yophando esephepheni, buza umphathi wakho malunga nexesha, umhla kunye nendawo eza kuba kuyo iseshoni elandelayo yeqela, apho uya kufumana inkxaso ngeAfrikaans, isiNgesi nesiXhosa.
Ukuba uthunyelelwe ilinki yolu xwebhu lwemibuzo yophando, ube udinga inkxaso, nceda uthumele i-imeyile ku-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441.
Ndingaqhagamshelana njani nale nkampani iqhuba olu phando?
Ungathetha neqela laseAephoria ngokuthumela i-imeyile ku-: help@aephoria.co.za okanye uthumele umyalezo weWhatsApp ku-: 071 186 3441.